ဘေလီဇ် Trust မှ
တစ်ဦးကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတဦးတည်းတည်ထောင်နိုင်အပြင်းထန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအကာအကွယ် features တွေသင့်ရဲ့ကမ်းလွန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ယုံကြည်မှုဥပဒေနှင့်အသင့်အိမ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရဲ့ဥပဒေများနှင့်အဆုံးကနေသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခွဲထုတ်နှင့်အတူစတင်ပါ။ တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုဖွဲ့စည်းရန်ဖို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Trusts မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် (သို့မဟုတ်အခြေချ) ယုံကြည်မှုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအကြိုးအတှကျကြသည်, တစ်ဦးဂေါပကတစ်ဦးယုံကြည်မှုကာကွယ်ကစီမံခန့်ခွဲရသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. ကိုလည်းအကာအကွယ်ယုံကြည်မှုတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်တသားတရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဘို့ကိုထူထောင်နိုင်ပါတယ်, ဆိုလိုတာက Self-အခြေချ spendthrift ကိုး စား. ဟုခေါ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားကိုး စား. အကာအကွယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏အသံဥပဒေရေးရာ platform ပေါ်တွင်မှီခိုနေရသည်။
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးဘေလီဇ် Trust မှဖွဲ့စည်း
ဘေလီဇ်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အချို့သောအဆင့်မြင့် feature များနှင့်အတူမိမိတို့၏ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများ updated ။ ထိုအကိုး စား. တပါး settlor များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အလို့ငှာတစ်ဦး Belizean နေထိုင်သူမဖွစျနိုငျနှင့်ယုံကြည်မှုအတွက် encumbered အိမ်ခြံမြေဘေလီဇ်သို့မဟုတ်ပွညျ၌တည်ရှိသောမပေးပါ။
အဆိုပါ settlor နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဘေလီဇ်နေထိုင်လို့မရပါဘူး
ဤအဘေလီဇ် Trusts မှအားလုံးအခွန်လွတ်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်နှင့်ဤအကာအကွယ် features တွေ Self-အခြေချနေထိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဘေလီဇ်ယုံကြည်မှုကိုတစ်ဦးပြင်းထန်အပိုင်းအစအခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရဲ့ပညတ်တရားအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုသောပထမဦးဆုံးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကိုး စား. များအတွက်အမြဲစည်းမျဉ်းတစ်ခုဖျက်သိမ်းရှိခဲ့သည် - Non-ကုသိုလ်ဖြစ်ကိုး စား. 120 နှစ်ပေါင်းဦးရေအများဆုံးကန့်သတ်ဖြစ်ကြပြီးအလှူအတန်းကိုး စား. န့်အသတ်ရှိပါတယ်။
Belizean ယုံကြည်မှု၏အကာအကွယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်လေးမြင့် - ကွာရှင်း, အကြွေး, တရားစီရင်ပိုင်နှင့်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုရှာကြံကြသူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့, ဘေလီဇ်၌တည်ထားတဲ့ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုကိုစူးစမ်းရန်သင့်စာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးဖြစ်သင့်သည်။ ပြဌာန်းချက်လိမ်လည်လွှဲပြောင်း, ဒေဝါလီခံခြင်းနှင့်သာမန်ပိုင်ဆိုင်မှုရောက်ရှိဖို့ရန်အသုံးပြုနိုင်တရားစီရင်ခြင်းကိုပြုမူသောအမှုအပြန်အလှန်ဘက်တော်သားကနေယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသီးခြားထား။ ဘေလီဇ်ယုံကြည်မှု၏ privacy စိစစ်ဖို့လျော့နည်းရှိုင်းနေသောသူတို့အဘို့အခြားအားကောင်းတဲ့အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ယုံကြည်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များနှင့်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်သည့်အခါဤအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးနဲ့ငွေစု, သင့်ဘေလီဇ် Trust မှပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ကျနော်တို့အပြည့်အစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ, ဆန်ခါတင်, မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်နှင့်ယုံကြည်မှုကာကွယ်န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။
အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုယုံကြည်မှုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုကွဲပြားသောကြောင့်, အသေးစိတ်များအတွက်အတွင်းမေးလျှောက်။
ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်ဘေလီဇ် Trust မှရေးဆွဲ
(တစ်နှစ်လျှင်) Trust မှန်ဆောင်မှုများ
ကျနော်တို့နေထိုင်သူရုံး, အေးဂျင့်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များအဖြစ်ကာကွယ်နှင့်ဆန်ခါတင်န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။ သင့်ရဲ့အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းငါတို့သည်သင်တို့၏ယုံကြည်မှုတညျဆောကျပုံမှအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေရှင်းပြပါ။
ယုံကြည်မှု grantor, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, ဂေါပကများနှင့်ကာကွယ်ဘို့မှတ်ပုံတင်အထောက်အထား